R/W Saacid oo dalbaday in uu Baarlamaanka kahor jeediyo Khudbad iyo Baarlamaanka oo Shuruudo adag ku xiray - iftineducation.com
iftineducation.com – Xog Hoose ay Heshay Shabakada iftineducation.com ayaa tibaaxaya in R/Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid) uu ka dalbaday Gudoonka Baarlamaanka in uu Khudbad ka hor jeediyo Xildhibaanada kahor inta aan codka kalsoonida loo qaadin Xukuumadiisa.
Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintan la socodsiiyay qaar badan oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka hasa ahaatee Xildhibaanada tirada badan ee taageersan Madaxweynaha ayaa diiday dalabkaasi iyagoona Shuruud uga dhigay in R/Wasaaraha uusan Khudbad ka jeedin Baarlamaanka ama ugu yaraan codka kalsoonida loo qaado in uu Khudbad u jeediyo Baarlamaanka iyo in kale.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka si weyna ugu ololeenaya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay Shabakada Allbanaadir.com ayaa sheegay in Xildibaanada taageersan Madaxweynaha ay ka cabsi qabaan hadii R/Wasaaraha loo ogolaado in uu Baarlamaanka ka horjeediyo Khudbad in ay suurto gal tahay in Mr Saacid uu Madaxweynaha wax ka sheego arimo badan oo qarsana uu banaanka soo dhigo.
Mudanahan katirsan Baarlamaanka ee diiday Xigashada Magaciisa ayaa xusay in Dalabka Baarlamaanka badankiis ee ah in Cod loo qaado Khudbada R/Wasaaraha jeedinayo ay tahay mid Faa’iido ku jirta oo banaanka soo dhigeysa tirada Xildhibaanada taageersan R/wasaaraha taa oo kala cadeyn doonta inta Xildhibaan ee taageersan R/Wasaaraha.
Lama oga sida ay ku dambeyn doonto arintan iyo in Baarlamaanka ay aqbali doonaan in R/Wasaaraha uu Khudbad u jeediyo kahor inta aan Codka Kalsoonida loo qaadin Xukuumadiisa Maalmaha soo aadan.